दुई सीट बेचेर किनेको सत्ता कतिसम्म टिक्ला ? - Dainik Nepal
जगन दाहाल २०७६ असोज १५ गते ९:०६
राज्यका विपक्षी पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा र भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धन सिक्किमेलाई स्वीकार्य छैन र गठजोड दललाई मतदान नदिनु भन्ने माग राख्दै आएपनि आज भारतीय जनता पार्टीले भने राजधानी गान्तोक निर्वाचन क्षेत्र आफूले जितिसकेको कुरामा विश्वास रहेको बताएको छ ।
तीन निर्वाचन क्षेत्रमा हुने उप चुनाउलाई लिएर सत्ताको तानातानमा रहेका बीजेपी र एसकेएमको गठजोड कत्तिको बलियो सावित हुन्छ त्यो जनताले देख्न बाँकी नै छ । जनतालाई विकास, अधिकार, भ्रष्टचार मुक्त राज्य, ३७१ एफ-को पूर्ण सुरक्षा गर्ने, सिक्किममा सिक्किमेको राज कायम गर्ने बाचा बन्धन लिएर सत्ताको चौकिमा पुगेको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले अहिले आफ्ना बाचा बन्धन पूरा गर्न नसक्दा केन्द्रीय सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी अघि घुँडा टेक्न पुगेको छ ।
सिक्किमेलाई परिवर्तनको हवामिठाई खुवाएर सत्तामा पुगेको एसकेएम पार्टीको क्रियाकलापबाट चार महिनामै जनता वाक्क, दिक्क र न्याक्क भइसके। व्यवस्था परिवर्तनको आशामा जनताले मतदान दिएर बनाएको सरकारको चार महिने कार्यकाल मै जनताले पूर्व मुख्यमन्त्री स्व. नरबहादुर भण्डारी र पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङलाई याद गर्न थालिसकेका छन् ।
सिक्किमको राजनीतिमा भारतीय जनता पार्टीको सोझो हस्तक्षेपले जनताले पाएको प्रजातन्त्र एउटा खोष्टो मात्र रहेको सावित हुँदैछ। गएको आम चुनाउमा सिक्किममा दुईवटा मुख्य राजनीतिक दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (एसडीएफ) र सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम)- पार्टीलाई जनताले मतदान दिएका थिए ।
३२ वटा विधानसभा आसन भएको राज्यमा १७ वटा आसन ल्याएर एसकेएम पार्टी सत्तामा पुग्यो भने १५ सीट ल्याएर एसडीएफ पार्टी दह्रो विपक्षकोरूपमा रहेको थियो। पछि आएर एसडीएफ पार्टीका १० जना विधायक भारतीय जनता पार्टीमा सामेल भए भने एसडीएफकै दुई विधायक सत्तारूढ एसकेएम पार्टीको दाम्लो समात्न पुगे ।
अन्तिममा गएर आफ्ना समर्थकसँग पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ एसडीएफ पार्टीका एकल विधायक रहे। सिक्किममा चुनावै नलडी अर्थात गोबर नसोरी, घाँस नकाटी दुध, दही, घ्यू, मोही खाने केन्द्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन्यो। भन्नको तात्पर्य आम चुनाउमा एक सीट पनि नल्याएको भारतीय जनता पार्टीसँग अहिले १० जना विधायक छन् भने १५ सीट ल्याएर दह्रो विपक्षी बनेको एसडीएफ पार्टीमा एक जना मात्र विधायक रहेका छन् ।
आब कुरा आयो गान्तोक, मार्ताम रुम्तेक अनि पोकलोक कामराङ तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुने उपचुनाउको। तीनवटा उपचुनाउको निम्त भारतीय जनता पार्टी र एसकेएम पार्टीले भर्खरै गठबन्धन गरे। सिक्किमको राजनीतिक गठबन्धनमा यो पहिलो गठबन्धनहोला जो एउटा मान्छेको चौकी बचाउनको निम्ति जनताको मतदानलाई कुल्चिएको होस या चुनाउ अघि नै निर्वाचन क्षेत्र बेचिएको होस ।
पहिलो कुरा त मुख्यमन्त्री पीएस गोले भ्रष्टचारको मामिलामा एक वर्षको कारावासको सजाय काटेर आएका हुन्। गएको आम चुनाउमा उनको कारावासको मामिलालाई ध्यानमा राख्दै चुनाउ लड्न दिइएको थिएन। सिक्किमका राज्यपाल गङ्गा प्रसादले पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी पीएस गोलेलाई ६ महिनाको निम्ति मुख्यमन्त्रीको सपथ दिलाएका थिए ।
यसै विषयलाई लिएर एसडीएफ पार्टीले भारतको सर्वोच्च न्यायालयमा मामिला पनि दर्ता गरेको थियो। आम चुनाउमा चुनाउ लड्न नपाएका पीएस गोलेले अचानक उप चुनाउमा लड्न पाउनु अचम्मको कुरा रहेको छ। केही दिन अघिसम्म पीएस गोलेले चुनाउ लड्न नपाउने कुरा चलिरहेको थियो भने भारतीय जनता पार्टीसँग दुई सीटमा गठबन्धन भएपछि उनलाई चुनाउ आयोगले क्लीन चिट दिएर चुनाउ लड्न योग्य बताएको छ।
एक असम्बैधानिक मानिसलाई चुनाउ लड्न योग्यताको प्रमाण पत्र कुन दबाउको आधारमा चुनाउ आयोगले दियो यस विषयमा विपक्षी राजनीतिकदल, गैर सरकारी संगठन अनि आम मानिसलाई बुझाउन सक्नुपर्ने माग अघि आउँदैछ। यसरी नै भारतीय जनता पार्टीले सिक्किमको राजनीतिमा अचाहिँदो हस्तक्षेप गरेको विभिन्न पार्टीहरूले आरोप लगाएका छन् भने पछि गएर सिक्किमको विशेष सुरक्षामाथि जम्मू काश्मिरको जस्तै हमला त हुने होइनके भन्ने एउटा त्रास पनि व्यक्त गरेका छन्।
अब सिक्किमे जनताले देख्नुछ की दुई सीट बेचेर किनेको सत्ता कतिसम्म टिक्ला? बैशाखीको शहारामा चलेको सरकारले जनताली कतिसम्म न्याय दिनसक्ला त्यो आउने दिनमा देखिने कुरा हो। अहिलेसम्म सिक्किममा एक सीट पनि नजितेको भारतीय जनता पार्टीले अब के सिक्किममा सरकार बनाउला त ?